FARAH PANDITH OO LOO MAGACAABAY ERGEY MARYKANKA XIDHIIDHIYA ADUUNKA MUSLIMKA | Toggaherer's Weblog
Dowlada Maraykanka ayaa ergay gaar ah markii ugu horeysay u magacowday dadka Muslimka ah ee Caalamka ku dhaqan, ergaygan ayaa lagu sheegay inay noqon doonto Haweenayda lagu magacaabo Farah Pandith.
Farah Pandith oo ah haweenay Muslimad ah, ayaa ayadu horey u ahaan jirtay sarkaal sare oo ka tirsan Wasaarada Arrimaha Dibada ee dalkaasi Maraykanka, waxayna ku dhalatay oo asal ahaan kasoo jeedaa gobalka Kashmiir ee Hindiya gacanta ku heyso.
Farah ayaa horey u ahaan jirtay diblamaasi Maraykan ah oo kasoo shaqeeyey qaaradaha Yurub iyo Aasiya.
Qoraal loo gudbiyey shaqaalaha Wasaarada Arrimaha Dibada ee Maraykanka ayey Mrs. Hillary Clinton, Xoghayaha Arrimaha Dibada Maraykanka ku sheegtay Ms.Farah inay tahay qof mutacalimad ah oo wax badan kusoo kordhin doonta xiriirka ka dhaxeeyey Maraykanka iyo Muslimiinta.
“……Farah Pandith waxay ka qeyb qaadan doontaa sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhaxeeyey Muslimiinta iyo Maraykanka, ayadoo meesha laga saarayo wixii dhaawici kara xiriirka labada dhinac…..”ayey tiri Hillary Clinton oo markii ugu horey sheegtay in Xukuumada Maraykanka xooga saareyso sidii wax looga qaban xasaasiyada dhextaal Muslimka iyo Maraykanka.
Magacaabida Ergaygan ayaa kusoo beegmaysa bil kadib markii uu Madaxweyne Obama khudbad uu ka jeediyey dalka Masar ku sheegay in xukuumadiisa ay hagaajin doonto xiriirka ay laleeyihiin dunnida Islaamka.